खुट्टा निदाउँने वा झम्झम् गर्ने र दुख्ने गर्छ ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस् र सजिलै छुटकारा पाउनुहोस् – ramechhapkhabar.com
खुट्टा निदाउँने वा झम्झम् गर्ने र दुख्ने गर्छ ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस् र सजिलै छुटकारा पाउनुहोस्
खुट्टा भारी भएजस्तो हुने, स्पर्श अनुभव गर्न नसक्ने, झन्झनाहट हुने अवस्थालाई खुट्टा निदाएको भनिन्छ । खुट्टामा दवाव पर्न जाँदा यस्तो हुने गर्छ । हाम्रो शरीरमा स्नायुकोष (नर्भ)ले मस्तिस्कसम्म पुरयाउने काम गर्छ । शरीरका अन्य भागमा जस्तै खुट्टामा पनि कैयौँ स्नायुको कोषहरु हुने गर्छ । खुट्टामा दवा पर्न जाँदा रक्तसञ्चार प्रणाली अवरुद्ध हुन्छ । जस्ले गर्दा प्रशस्त रगत र त्यसको साथमा अक्सिजन प्रर्याप्त पुग्न पाउदैन । यसले गर्दा खुट्टामा स्नायुहरु केही समयको लागि निस्कृय हुन्छन् र बाह्य सन्देश मस्तिस्कसम्म पुग्न सक्दैन् । यसले गर्दा खुट्टा झम झम गर्ने स्पर्श अनुभव गर्न नसकिने र भारी भएको महशुस हुन्छ । जव खुट्टामा दवाव हट्छ अथवा खुट्टा चलाइन्छ अथवा मालिस गरिन्छ रक्तसञ्चार पुन नियमित भई खुट्टा निदाउने समस्या हटछ् ।
तपाई हामी मध्ये धेरैलाई खुट्टा गनाउने समस्या हुनसक्छ । कुनै कार्यक्रम तथा साथिको कोठामा जाँदा पनि खुट्टा गनाउने समसस्याले सताउछ । दिनभर काम गर्दा लगाएको जुत्ता खोल्न साथ खुट्टाबाट आउने गन्धले नाकै फुट्ला जस्तो हुन्छ । जसले गर्दा व्यक्तिको पहिचानलाई समेत धमिलाउन सक्छ । नजिकै बस्नेहरुको लागी ठुलो सास्ती खेप्नुपर्ने हुन्छ । तपाईको वरपर कोहि पनि बस्न चाहदैनन् । अब खुट्टा गनाउने समस्यालाई कसरी हटाउन सकिन्छ । पढौँ यी केही उपायहरु ।
जुत्ता र मोजा लगाउन बन्द गर्नुपर्छ । सकेसम्म खुट्टा खुल्ला राख्नुपर्छ । यो बेलामा छालामा परेका साना साना चिराहरु दुख्छन र तिनीहरूमा संक्रमण हुन सक्छ । यस्तो बेलामा मन तातो पानीमा नुन हालेर खुट्टा ५–१० मिनेट भिजाउनु पर्छ । नुन पानीले फंगसलाई बढ्नबाट रोक्छ । यसले छालामा आउने पसिनालाई पनि केही कम गर्छ । साथै यसरी भिजाउँदा छाला केही नरम हुन्छ र फंगस हटाउने क्रीम छालाको भित्री तहसम्म सजिलो तरिकाले पुग्छ । नुन पानीमा भिजाउने क्रम ३–४ हप्तासम्म गरिरहनु पर्छ ।
यस्तो समस्या पर्ने व्यक्तिले कपडाको जुत्ता लगाउनु बेश हुन्छ । छालाको जुत्ता सकभर प्रयोग नगर्नुहोस् । विशेष गरी गर्मीको याममा त जुत्ताभन्दा चप्पलरस्लीपर जुत्ता लगाए नै वेश हुन्छ । जुत्तालाई सकेसम्म सुख्खा राख्नुपर्छ । जुत्ता सुकाउन जुत्तालाई भित्रपट्टि सफा कपडा वा कागजले हावा खेल्ने ठाउँमा खोलेर राख्नु बेश हुन्छ । तुना बान्ने जुत्ता छ भने तुना खोलेर सकेसम्म हावा खेल्ने ठाउँमा राखिदिनुपर्छ । सम्भव भएमा जुत्ता बेला बेलामा घाममा सुकाउनाले पनि राम्रो हुन्छ ।
खुट्टा दुख्नुको प्रमुख कारणमध्ये अग्लो हिल भएको जुत्ताको प्रयोग पनि एक हो । २ं५ इन्चभन्दा बढी हिल भएको जुत्ताले पैंतालामा अधिक दबाव सिर्जना गरी पैैंतालाको आकारलाई साँघुरो बनाइदिन्छ, जसले गर्दा पीडा हुन्छ । हिल जुत्ताको प्रयोगले खुट्टा पोल्ने, मर्कने जस्ता समस्या बढाउँछ ।
सही सन्तुलन र कम दबावको लागि बाक्लो हिल भएको जुत्ताको प्रयोग नगर्ने । औंला राख्ने ठाउँमा खुला भएको उच्च हिलयुक्त जुत्ताको प्रयोग गर्ने । साँझमा करिब १५ मिनेटका लागि खुट्टालाई नुनपानीमा डुबाउने । सुत्नुअघि खुट्टाको राम्ररी मसाज गर्ने । यसबाट रक्तसञ्चारलाई प्रभावकारी बनाई दुखाइ कम गर्छ ।
धेरै कसिलो जुत्ताको प्रयोगले पनि खुट्टा दुख्ने गर्छ । कसिला जुत्ताले खुट्टाका औंलाहरुमा दबाव पर्ने गर्छ । लामो समयसम्म असजिलो जुत्ताको प्रयोगले शरीरको मांसपेशी, जोर्नी, खुट्टाको लिगामेन्ट, पैंताला, कम्मर तथा पिठ्युमा हानि पुर्‍याउँछ । ढल्किँदो उमेरसँगै खुट्टाको बनावट परिवर्तन हुने गर्छ । त्यसैले जुत्ता किन्न जाँदा खुट्टाको नाप लिएर मात्र जुत्ता छान्ने गरौं ।
गुणस्तरीय र खुट्टालाई आरामदायी हुने जुत्ता लगाउने । ६ देखि आठ महिनाको अन्तरालमा नयाँ जुत्ता लगाउने । जहिले पनि साँझतिर जुत्ता खरिद गर्ने । दिनभरको हिँड्डुलले खुट्टामा बढी सुजन हुने भएकोले त्यसबेला खरिद गरेको जुत्ता आरामदायी हुन्छ । जुत्ता खरिद गर्दा जहिले पनि दुवै जुत्ता लगाएर केही कदम हिँड्दै सजिलो भए-नभएको जाँचौं ।
गर्भवती भएको बेला बान्ता हुने, ढाड दुख्ने जस्तै खुट्टा दुख्ने समस्या पनि हुन्छ । बढ्दो तौलका कारण गर्भावस्थामा खुट्टामा बढी भार पर्ने गर्छ, जसले गर्दा खुट्टा दुख्ने र थाक्ने समस्या हुन्छ । यस्तो बेला बढ्दो तौलकै कारण घुँडा र पैंतालामा बढी दबाव हुन्छ । यस्तो समस्या गर्भावस्थाको तेस्रो महिनादेखि सुरु हुन्छ । बच्चाको जन्मसँगै दुखाइ हराउँछ ।
खुट्टा लामो समयसम्म नटेकी सकेसम्म उचालेर राख्ने । शरीरमा पानीको अभाव हुँदा खुट्टा सुनिने र दुख्ने भएकोले बढी झोल पदार्थ सेवन गर्ने । बसेर गोलीगाँठोभन्दा मुनिको भागलाई गोलाकार रुपमा घुमाउने । यस्तो व्यायामले गोलीगाँठोमा रक्तसञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
खुट्टाको नङ बढ्दा पनि पैंतालामा बेलाबखत समस्या बढ्ने गर्छ । नङ बढेर औंलाको छेउछाउमा गढेमा नङछुरी भएर दुखाइ बढ्छ । यसैले तपाईंले बेलाबेलामा नङ काट्न ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कसिलो जुत्ताको प्रयोगले पनि नङछुरी भएर खुट्टामा जलन हुन्छ ।
खुट्टाको दुखाइ, जलन, सुजन कम गर्न केही समय तातोपानीमा खुट्टा डुबाउने । अझ प्रभावकारी फाइदा लिन फिट्किरी वा एप्पल साइडर भेनेगरलाई पानीमा मिसाउने । खुट्टालाई पानीमा डुबाएपछि छालामा गढेको नङलाई सुती कपडाले विस्तारै माथि निकाल्ने । औंलामा संक्रमण भएको छैन भने छालामा गढेको नङ आफैंले काट्न सक्नुहुन्छ । संक्रमण भइसकेको छ भने चिकित्सकको परामर्श लिनु उचित हुन्छ ।
कामको दौरान लामो समय उभिनुपर्छ भने सजिलो खालको जुत्ता लगाउनुस् । उभिँदा शरीरको वजनलाई एउटा खुट्टाबाट अर्को खुट्टामा आलोपालो सार्नुस् । हरेक घण्टा उभिएपछि कम्तीमा दश मिनेट आराम गर्नुहोस् । समय-समयमा खुट्टा तन्काउनुस् । सुत्दा आफ्नो खुट्टालाई शरीरभन्दा केही माथि उठाउँदा पनि राहत मिल्छ ।